कता हराए निर्देशक जोयश पाण्डे ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कता हराए निर्देशक जोयश पाण्डे ?
पुराना चलचित्र निर्देशक, कलाकार तथा निर्माता नरेश पौड्याल क्रिसमस डेका दिन पोखराको लेकसाइडमा भेटिए तर तनावमा ।
नरेश पौड्याल अहिले तनावमा छन् । केही दिन अगाडी उनले नयाँ फिल्म बनाउने र त्यसको निर्देशक आफु नभई जोयश पाण्डे हुने बताएका थिए । तर अहिले नरेशलाई उनका निर्देशक जोयश पाण्डे कहाँ के गर्दै छन् भन्ने कुरा थाहा छैन । भन्छन् – “एग्रीमेन्ट भएको हो, तर अहिले जोयश सम्पर्कमा छैनन् ।” जोयश पाण्डेले यस अघि निर्देशन गरेको फिल्म साँघुरो व्यापारिक हिसाबले कमजोर भएपनि उनको निर्देशकिय क्षमताको भने फिल्म नगरीमा तारीफ भएको थियो ।
नरेश पौड्यालले केही समय अगाडी छायाङ्कन गरीएको फिल्म जंगेमा कलाकारको रुपमा काम गरेका थिए । सो फिल्मका एक कलाकार जोयश पाण्डे पनि हुन् । उनका अनुसार सोही फिल्मको छाायङ्कनको क्रममा जोयशसँग नजिकिने र उनलाई आफ्नो फिल्मको जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो ।तर अहिले जोयश कहाँ छन उनलाई थाहा छैन ।
उनका अनुसार मंसिरको अन्त्यमा जोयशसँग उनको पछिल्लो सम्पर्क भएको थियो । सो समयमा जोयशले आफ्नो बिबाहको कुरा भइरहेको र सकेसम्म मंसिरमा नभए माघमा बिहे हुने फोनमा बताएको नरेश बताउँछन् । भन्छन् – “त्यसपछी जोयश सम्पर्कमा छैनन्, उनका चार वटा मोबाइल नंवर सबै अफ छन, जे भए पनि सम्पर्कमा त आउनु पर्ने ।”
त्यतीकैमा नरेशले हाम्रै अगाडी जोयशका सवै नंवरमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे, तर स्वीच अफ । त्यसपछी उनले सो फिल्मको स्कृप्ट लेख्ने जिम्मा दिएका काठमाडौको ओस्कार कलेजका प्रिन्सीपल बिनोद पौडेललाई फोन गरे, तर त्यो फोन पनि रिसिभ भएन, त्यस पछि जोयशका नजीकका कलाकार शुशांक मैनाली अनि नायीक रिचा शर्मा । तर कसैको फोन उठेन । एकछिनमा कलाकार शुशांक मैनालीले कलब्याक गरे । उनीसंग नरेशले जोयशको बारेमा सोधे, तर शुशांकबाट खासै जानकारी नभएको कुरा आयो । तर फोन राखेपछी उनले भने – “शुशांकले त तपाई पहिला काठमाडौ आउनुस, बरु म बुटवल नै गएर जोयशलाई खोजेर ल्याउछु भनेको छ ।”
नरेशलाई अझै चित्त बुझेन, त्यसपछी हाम्रै अगाडी बुटवलका जोयशका चिनजानी कलाकार प्रदीप ढकाललाई फोन गरे, प्रदीपले पनि जोयशको बारेमा केही जानकारी नभएको बताए ।
नरेश भन्छन् – “देख्नु भो ! तपाईकै अगाडी यति मान्छेलाई फोन गरे, मान्छे कहाँ छ नै थाहा छैन ।”
आखिर कहाँ हराए त जोयश ?
नरेश पौड्यालका अनुसार फिल्म साँघुरो हेरेपछी उनलाई जोयशले केही गर्न सक्छन भन्ने लागेको थियो, सोही समयमा उनले जोयशलाई निर्देशक र बिनोद लाई लेखकको रुपमा लिने औपचारीक निर्णय गरेका थिए । फिल्मको ‘वान लाइन’ भने स्वयं नरेशको थियो ।
करीब दुई घण्टा लामो क्याफे बसाईको अन्त्यमा नरेशले भने – “यस्तै हो भने यो फिल्म पनि आफै निर्देशन गर्छु ।” चार वर्ष अगाडी नरेशले निर्माण तथा निर्देशन गरेको फिल्म दिपशिखा ब्यबशायिक रुपमा असफल भएपछी उनको फिल्मी सक्रियता घटेको थियो । उनका अनुसार नयाँ र पुराना फिल्मकर्मीको फ्युजनबाट गतिलो फिल्म बनाउने उनको योजना हो ।